Labada garoon ee Anfield iyo Etihad oo la kala geeyey labo koob – Yaa ku guuleysan doona maanta horyaalka Premier League ma Man City mise Liverpool? – Gool FM
Haaruun May 22, 2022
(Manchester) 22 Maajo 2022. Horyaalka Premier League ayaa la isla aaday maalinta ugu dambeysa si loo go’aamiyo arrimo dhowr ah oo ay hor boodeyso kooxda ku guuleysanaysa horyaalka kal ciyaareedkan.
Wax waliba waxa ay kala caddaanayaan marqibnimada maanta iyadoo la ogaan doono kooxda ku guuleysanaysa horyaalka Premier League Manchester City iyo Liverpool.
Man City haatan waxa ay leedahay 90 dhibcood, farqiga goolasheeduna waa 72 gool, halka Liverpool ay leedahay 89 dhibcood, farqiga goolasheeduna uu yahay 66 gool, waxaana u dhexeeya labada kooxood farqi lix gool ah oo ay ku sarreyso Sky Blue.
Manchester City oo hoggaanka haysa ayaa hal dhibic ka horreysa Liverpool, waxaanay taasi ka dhigan tahay in haddii la barbarreeyo ama laga badiyo uu horyaalku gacanta u geli doono Liverpool, haddiise ay natiijooyin isku mid ah keenaan amaba Liverpool ay dhibco lumiso, waxa la caleemo saari doonaa horyaalka Man City.
Wargeyska Daily Telegraph ayaa daabacay in maamulka Premier League ay ku adkaatay inay xal u helaan arrinta ah garoonka ay geynayaan koobka horyaalka maadaama labada kooxood ee City iyo Reds ay fursad u haystaan inay ku guuleystaan koobka maanta, isla markaana midkooda ku guuleystaa uu doonayo in koobka lagu guddoonsiiyo garoonkooda dhexdiisa isla marka ay ciyaartu soo dhammaato.
Maamulka Premier League ayaa si uu arrintan u xalliyo waxa uu go’aan ku gaaray inuu sameeyo koob labaad oo loo ekaysiiyey kan horyaalka Premier League oo been abuur ah oo la geyn doono labada garoon midkood.
Manchester City ayaa garoonkeeda la geyn doonaa koobka asalka ah ee Premier League maadaama ay tahay kooxda hoggaanka haysa ee ugu dhow hanashada horyaalka, halka garoonka Anfield la geyn doono aan asal ahayn ama Copy ah oo loo ekaysiiyey midka rasmiga ah ee Premier League.
Haddii ay Manchester City garaaco Aston Villa oo ku soo booqanaysa garoonkeeda Etihad, waxa la guddoonsiin doonaa koobka asalka ah ee horyaalka Premier League, waxaanay u noqon doontaa markii afaraad muddo shan sanadood gudahood ah ee ay horyaalka ku guuleystaan.
Sidoo kale, Liverpool ayaa haddii ay ku guuleysato horyaalka oo ay garaacdo Wolves, isla markaana laga qabto Man City, waxa la guddoonsiin doonaa koob aan ahayn midkii rasmiga ahaa, laakiin aan laga garanaynayn, iyadoo marka dambe loogu beddeli doono midka asalka ah haddiiba ay koobka ku guuleystaan maanta.
Si kastaba kooxda horyaalka Premier League ku guuleysanaysa waxaa la go’aamin doonaa maanta oo ah maalinta horyaalka la soo gabagabaynayo.
Yaa ku guuleysan doona horyaalka Premier League Man City mise Liverpool aragtidaada qeybta hoose inoogu reeb.?